Shirka London oo maanta si toos ah u furmaya iyo madax badan oo ka qeyb galeeysa – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shirka London oo maanta si toos ah u furmaya iyo madax badan oo ka qeyb galeeysa
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada London ee caasimadda dalka UK uu ka furmo shirka caalamiga ah ee looga hadlaayo arrimaha Soomaaliya, kaas oo ay ka qeyb galayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyaada dalka.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay dowladda Ingiriiska, waxaa ka qeyb galaya ilaa 40 dowladood oo danneeya Soomaaliya, waxaana diiradda lagu saari doonaa arrimo quseeya Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bani’aadanimada iyo qodoba kale oo aad u badan.
Dhinaca Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qeyb galaya madaxwweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Sidoo kale, mas’uuliyiinta kale ee shirkaasi ka qeyb galaya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Uganda Yoweri Musaveni, ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, wakiilo ka kala socota dowladda Mareykanka, Jaamacadda Carabta, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Ururka Islaamka iyo dowladaha kale ee taageera Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, shirkaan oo ah kii seddexaad ee lagu qabto magaalada London ayaa maanta waxaa si wadjir ah u shir guudoomin doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Gutteres.
Shirkaan oo socon doonno muddo hal maalin ah, ayaa la filayaa markii uu soo gaba-gaboobo in laga soo saaro war-murtiyeed oo ay ku qoran yihiin qodobo wax ku ool ah.